Iindaba-Ukujonga ukhuseleko ngokukhawuleza
Ukujonga ukhuseleko ngokukhawuleza
Ngena kwibhayisikile yakho entsha yombane uhambe uyokuqhuba.
Ngumbono olungileyo ukwenza ezinye iitshekhi ngaphambi kohambo ngalunye.
Qinisekisa ukuba yonke into iqinile! I-Wheel nut okanye ikham yokukhupha ngokukhawuleza. Qinisekisa ukuba isali kunye neempondo ziqinile kwaye ukuphakama kufanelekile kuwe. Jonga ukuba i-barbar ijikeleza ngokukhululekileyo kwaye iintambo aziphazamisi.
Tsala iibhuleki kwaye uqiniseke ukuba zixinene kwaye inokutshixa amavili. Oku kwenza ukuba kube lula ukuma ecaleni kwebhayisikile kwaye uyityhalele phambili ngebhayisikile ngelixa ufaka iziqhoboshi. Eli ikwalixesha elifanelekileyo lokujonga uxinzelelo lwamavili kunye nefoloko. Ukuhambisa ibhayisekile phambili kunye neziqhoboshi zangaphambili kuya kunceda ukubonisa naziphi na iingxaki.
Jonga ukuba ii-pedals zakho ziqinisiwe kwaye zijikeleza ngokukhululekileyo, kwaye kwangaxeshanye jonga ukuba ngaba ii-pedal ziqinisiwe na, zikhuphe, ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye, kufanele ukuba zikwazi ukujikeleza ngokukhululekileyo, kodwa akufuneki kubekho umsantsa ukusuka ekhohlo ukuya ekunene .
Okokugqibela, phakamisa amavili angaphambili nangasemva kwaye ucofe ezinye izithethi. Zifanele ziqine ukuvumela amavili ukuba ajikeleze. Amavili kufuneka ajikeleze ngokukhululekileyo kwaye ayinyani.
Olu khuseleko olukhawulezayo lokujonga lufuna uninzi.
Ixesha Post: Sep-30-2021